ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »4မင်္ဂလာဆက်ဆံရေးအစွမ်းထက်ကျိန်းဝပ်တော်
အားဖြင့် Mihaela Schwartz
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 25 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သင်သည်အစဉ်အဆက်သင်၏အမူအကျင့်မှုပုံစံများပိုကောင်းဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးဘို့သင်၏မေတ္တာဘဝကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလမ်းကိုအပေါ်သို့ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အချိန်ကိုယူကြပြီ? သင်မသိစိတ်ထဲကနေတစ်ဦးအပြုသဘောလမ်းရှိသင့်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေဘူးသောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်, သင့်အဘို့အဒုတိယမြောက်သဘာဝအချို့မျိုးဖြစ်လာခဲ့သည်သောသူအချို့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိပါတယ်နည်းတူ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်အခွံမာသီးကိုမောင်း. ပထမဦးဆုံးသူများထိန်းသိမ်းထားရန်နေမြဲနေစဉ်, သင်သည်အလေ့အကျင့်၏ဒုတိယအမျိုးအစားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့်သာပျော်ရွှင်ဆက်ဆံရေးကိုတစ်ဦးအလေ့အကျင့်သို့လှည့်ရန်ကိုအောင်မြင်တချို့အလေ့အကျင့်ကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့ကိုစဉ်းစားစေခြင်းငှါ,.
ရိုသေလေးစားမှုမဆိုဆက်ဆံရေးရှိသင့်ပါသည်တစ်ဦးပစ္စည်းဖြစ်, ကျွန်တော်အထက်တန်းကျောင်းပျော်ပါးအကြောင်းပြောနေတာရှိမရှိ, တစ်ခုတညဉ့်ရပ်တည်ချက်သို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ချိန်းတွေ့. တဲ့အခါမှာအလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ကုသအစွမ်းကုန်အရေးပါမှုဖြစ်လာ, သင်မင်္ဂလာဆောင်ရေရှည်တည်တံ့တစ်သက်တာထဲသို့လှည့်ရန်လိုတဲ့အထူးသဖြင့်ဆိုရင်. ရိုသေလေးစားမှုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်မေတ္တာကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်ညီမျှ, ့ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ကုသမအဖြစ်ကတကယ်တော့သင့်သဘောမတူကြောင်းဖော်ပြဆိုလိုတယ်, ယုံကြည်မှုသို့မဟုတ်လက်ခံရေးသင့်မရှိခြင်း.
သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုလေးစားသင်သည်ထိုသူတို့နေသောအဘို့ထိုသူတို့ကိုချစ်သူတို့ကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်ဆိုလိုတယ်. သင်သည်အသက်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကိုရစေခြင်းငှါ, သို့သော်ဤသင် / သူမ၏သူ့ကိုမလေးမစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာသင်အနေနဲ့တစ်စုံတစ်ရာပေါ်တွင်သင်၏နှစ်ဦးသဘောမတူအထူးသဖြင့်လာသောအခါစိတ်ကိုသိမ်းထားသင့်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်. တိုက်ပွဲတွေလည်း, ပင်အများဆုံးအရေးမရသူများ, စုံတွဲများမကြာခဏသူတို့ကအမှန်တကယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ယင်းကဲ့သို့အဖြစ်ပြုမူသင့်တယ်မေ့လျော့သောအခါအချိန်လေးဖြစ်ပါသည်.
2. လက်တော်၌လူတန်းစားပေါင်းစုံလက်အတွက် Go
ဒီအလေ့အကျင့်ကသင့်စိတ်အခြေအနေအပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်, သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ်အဖြစ်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်. ဒါဟာရုံးမှာ sedentary သောနေ့ရက်မတိုင်မီသို့မဟုတ်ပြီးနောက်အချို့သောလေ့ကျင့်ခန်းရရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်စုံတွဲတစ်တွဲကဲ့သို့အချို့ရဲ့အရည်အသွေးအချိန်ဖြုန်းဖို့အခွင့်အလမ်းဖွင်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အိမ်မှုဝေယျာနှင့်အတူချိုးဖျက်အတူတကွသင်၏ဦးခေါင်းကိုရှင်းပေးဖို့အောင်မြင်ဖို့ကာလဖြစ်၏အဖြစ်လက် Walking စကောင်းတဲ့စကားပြောဆိုအားပေးအားမြှောက်.
တီဗီကြည့်ရေပမ်းအစားဆုံးထဲကတဦးဖြစ်စေခြင်းငှါ (အကယ်. မအပေါင်းတို့၏အမြင့်ဆုံး) အားလပ်ချိန်လုပ်ဆောင်မှု, ဒါပေမယ့်ဆက်ဆက်စုံတွဲတစ်တွဲသကဲ့သို့သင်တို့ကိုမကူညီပါဘူး. တီဗွီကတကယ်တော့ရှိသမျှကိုအာရုံစိုက်, ဆက်သွယ်ရေးအဆို့အဖြစ်သရုပ်ဆောင်. တီဗွီကိုကြည့်နေစဉ်သင်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်? အဘယ်မျှတီဗွီကိုပိတ်လိုက်တဲ့အကြောင်း (အနည်းဆုံးအချိန်), တစ်စုံတွဲသည်ကဲ့သို့အချို့ရဲ့အရည်အသွေးအချိန်ပေး? သင်၏နေ့ရက်အကြောင်းပြောဆိုနိုင်, သင်ကဆိုဖာပေါ်မှာ snuggle နိုင်, သင့်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ကိုမှတ်မိသို့မဟုတ်သင့်မယ့်အားလပ်ရက်စီစဉ်ထား. သင်၏နှစ်ဦးကိုဝင်အပေါ်အလေးပေးဘာမှမ.
အဘယ်မျှနံနက်ယံ၌သင်၏လင်မှကော်ဖီသို့ဆောင်ခဲ့အကြောင်း? သို့မဟုတ်ထိုစာရွက်ကသူ့မိခင်ကိုခေါ်ဆိုနှင့်သူ၏အနှစ်သက်ဆုံးကလေးဘဝပန်းကန်ချက်ပြုတ်? ကိုမည်သို့သင့်ရဲ့ချစ်သူဝယ်ယူအ​​ကြောင်းကိုသူမ၏အကြိုက်ဆုံးကိတ်မုန့်? သို့မဟုတ်ပင်ပိုကောင်း, သူမ၏အဘို့ဖုတ်? ဒါဟာကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်နေစရာမလိုဘူး. အသေးစားကောင်းတဲ့အမူအယာမေတ္တာနှင့်ရိုသေလေးစားမှုကိုသင့်ခံစားချက်တွေကို. သင်သည်သူ့ကိုလက်လွတ်ပြောအချင်းချင်းသို့မဟုတ်စာသားမှတ်စုများကိုစွန့်ခွာသူ / သူမ၏တစ်ချိန်ကနေစဉ်၌သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်တစ်ဦးအပြုသဘောလမ်းအတွက်ကိုထိခိုက်စေနိူင်ကြောင်းအလေ့အထများရှိပါသည်.
12 လာသောအခါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အကောင်းမြင် Stay ရန်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ